I-Sugar Creek Treehouse enobhavu oshisayo - I-Airbnb
I-Sugar Creek Treehouse enobhavu oshisayo
Green Mountain, North Carolina, i-United States
Indlu eyakhiwe esihlahleni ibungazwe ngu-Jenna
Impela indawo owawuyiphupha useyingane! I-treehouse ihlala ngaphezu komfudlana omuhle wasentabeni. Eduze namapaki, ubuciko namasiko, ukubukwa okuhle, nezindawo zokudlela kanye nezindawo zokudlela. Uzoyithanda indlu yezihlahla ngenxa yokunethezeka kwezothando. Indawo yami ilungele izithandani, izihambi ezizimele, kanye nemindeni (enezingane).
I-Idyllic 600 sq. ft. indlu yezihlahla yomculi ekujuleni kwehlathi, amafithi angu-35 ngaphezu komfudlana wentaba onezimpophoma ezigelezayo - imizuzu nje engama-45 enyakatho-mpumalanga ye-Asheville, NC. Amamayela angu-45 nje entshonalanga ye-Boone, NC. Ihlezi phezulu esibhakabhakeni, leli khaya lihlinzeka ngokulala okufika kweziyisithupha. Landela izitezi zelogi ezintantayo uye endaweni ephezulu yothando enevulandi yase-Romeo ne-Juliet. I-lounge esihlalweni sefasitela lapho, ijabulela ukubuka okuhle kakhulu endlini. Noma ujabulele i-loft ethokomele yokulala ekhishwe ngaphandle kwegumbi lokuhlala. Yindawo ekahle yokugoqa ngencwadi enhle. Hamba eduze kwedekhi ukuze uthole ukubukwa okuhle komfudlana ngokushesha ngezansi. Hlala eduze kwesitofu sezinkuni esinyakazayo futhi ujabulele imfudumalo yaso ethokomele. Ikhishi lesimanje lenzelwe umpheki oyingcweti. Zonke izitsha zokupheka, izinongo eziphilayo, namafutha kunikezwa ukuze kulungiswe ukudla okumangalisayo. Lena indawo ngokuqinisekile owawuphupha ngayo useyingane!
Idizayinwe futhi yakhiwa abakhi bemvelo ababili abacabangayo nabanolwazi, le ndlu encane yomuthi ihlezi kumahektha angu-6 anezinkuni eningizimu - ebheke emithambekeni endaweni ephakeme ngamamitha angu-2,150. Iseduze neMt. Mitchell, intaba ende kunazo zonke empumalanga ye-Mississippi futhi imizuzu engamashumi amabili kuphela ukusuka e-Penland School of Crafts edumile kanye nomphakathi wase-Celo, e-Yancey County, lapho abaculi abaningi ngomuntu ngamunye behlala khona kunanoma yikuphi e-US The Blue Ridge. I-Parkway izokuthola kumakhilomitha angama-20 ukusuka ekhaya. Imigwaqo emisha egandayiwe ikuyisa enye indlela.
Ngokufinyelela okulula emigwaqweni enakekelwa nguhulumeni kanye namamayela angu-7 ukusuka kuzo zonke izinto ezitholakala kalula eBurnsville, NC, le eden ethule, eqhelile inikeza okungcono kakhulu kuyo yomibili imihlaba. Izilwane zasendle ezikhuthazayo kanye nepharadesi lombukeli wezinyoni, ezinye izici zalo zihlanganisa: ukubuka komfula omuhle waseNyakatho Toe ovela emathafeni asezintabeni, amadwala amahle aphuma ngaphandle, umhume omncane onomsindo, izindlela zemvelo kanye nezitshalo eziningi zasendle ezidliwayo.
Vele uhambe unqamule umgwaqo ukuze ujabulele umfula iToe. Inikeza amanzi ajulile aqabulayo okubhukuda kanye nokudoba okuhle kakhulu kwe-trout noma i-bass. Hamba ogwini lwamatshe futhi umane ujabulele ubuhle.
I-Appalachian Trail ingaphakathi kwamamayela angu-15 ukusuka ekhaya egijima ngasemngceleni we-NC kanye ne-TN. Thatha idrayivu emfushane ukuze uthole uhambo olubalulekile. Ikhaya futhi lingaphakathi kwamamayela angama-20 ukusuka e-Roan Mountain State Park kolunye uhambo oluhle lokuhamba ngezinyawo.
*** Sicela uqaphele indawo engaphezulu yokulala (hhayi ikamelo lokulala) ifinyelelwa ngeledi elingashintshi. Okuhle kakhulu ezinganeni ezifunda isikole noma abadala abahambahambayo. Ayifanele izingane ezincane nabantu abadala abadala.
4.76 out of 5 stars from 243 reviews
4.76 · 243 okushiwo abanye
I-treehouse ihlala endaweni eyimfihlo ngokuphelele, engamahektha ayi-6, enezinkuni. Kuphakathi kwamamayela angu-2 wedolobha elincane laseGreen Mountain elinesitolo sangempela esijwayelekile kanye neposi.
Idolobha elingumakhelwane iBurnsville linabantu abangaba ngu-1,700 futhi lihlala esigodini esizungezwe iziqongo eziphakeme kakhulu empumalanga yeMelika, kuhlanganise neMt. Mitchell. Idolobhana layo elincane liphethwe yiTown Square enezihlahla ezinde. IBurnsville itholakala kumamayela angu-35 enyakatho-mpumalanga ye-Asheville, eduze kwe-Mt. Mitchell Scenic Byway.
I-Mount Mitchell Crafts Fair iguqula imigwaqo ezungeze isikwele sedolobha lase-Burnsville ibe indaba yefestiveli yabathandi bemisebenzi yezandla nezobuciko, enabadwebi abasemthethweni abangaphezu kuka-150 ababonisa futhi badayise.
Ikwindla yaminyaka yonke i-Yancey County Dream Home Tour izuzisa iMayland Community College futhi ihlanganisa amakhaya ombukiso eBurnsville nasezindaweni ezizungezile.
Indawo yethu yokudlela esiyintandokazi yedolobha i-Garden Deli enohlu oluhle lwamasemishi ekhwalithi ephezulu, kanye nemingenelo yedina ngobusuku bezimpelaviki (ngamaSonto avaliwe). Indawo yabo yokudlela enhle yangaphandle isendaweni yaseDolobheni, ezungezwe izitshalo nezimbali eziluhlaza.
Abaningi bathanda ukushayela bezungeza ukuze bathole ama-Quilt Blocks akulendawo angu-200 afakwe emaceleni ezinqolobane nezakhiwo emaphandleni nasezigodini. Izindlela zokushayela eziyisishiyagalolunye zikuyisa ekubukeni izikwele ezipendwe ngokugqamile. Enkabeni yedolobha iBurnsville, bheka i-Quilt Block Sundial, i-sundial enkulu kunazo zonke eqonde mpo eNyakatho Carolina kanye nokuwukuphela kwe-quilt block sundial emhlabeni, ohlangothini lwesakhiwo se-Yancey Common Times Journal eduze kwaseTown Square. Isakhiwo sokhuni esingamafidi ayisishiyagalombili namafidi ayisishiyagalombili sinesethi yezinombolo ezintathu zokusho isikhathi: isikhathi sokulondoloza emini, sesikhathi esijwayelekile kanye nesisodwa sesikhathi esibonakalayo sasendaweni. Uqwembe oluseceleni kwebhulokhi luchaza indlela yokusebenzisa i-sundial.
Igalari yegalari ye-TRAC (Toe River Arts Council) ephakathi kwedolobha eku-102 West Main Street ikhombisa amaciko endawo anemibukiso eshintshayo kanye nesitolo esikhulu segalari. Ngomsebenzi ovela kumaciko angaphezu kuka-100 emithonjeni yezindaba ehlukahlukene: ubumba, ingilazi, ubucwebe, ukudweba, ukuthwebula izithombe, ifayibha, ukhuni, izithombe, imidiya exubile, nokuningi. Izinga nokuhlukahluka kobuciko endaweni kuvelele. I-TRAC ixhasa i-Toe River Studio Tour kabili ngonyaka ngempelasonto yesibili kaJuni, impelasonto yokuqala kaZibandlela. Izitudiyo ezingaphezu kuka-100 namagalari amelwe kulolu hambo lwamahhala, oluziqondisayo.
Isikole sobuciko esidumile iPenland School of Crafts singamamayela ayi-13 empumalanga. Cishe amamayela angu-10 empumalanga yedolobha kukhona i-energyXchange enezitudiyo zamaciko ezinikwa amandla yigesi yokulahla phansi. Zombili zinamagalari avuliwe izinsuku eziningi. I-Parkway Playhouse eseBurnsville iyitiyetha encane yochwepheshe enemibukiso kusukela ngo-Ephreli kuya kuDisemba.
I-Yancey County (lapho i-Burnsville itholakala khona) igcwele ulwazi oludala nokusha lwe-Agri-Tourism. Vakashela izimakethe zabalimi endawo namapulazi ukuze uthenge imikhiqizo emisha yesizini kanye nezibiliboco zasekhaya. Futhi ngasekupheleni kukaNovemba noDisemba, nquma isihlahla sakho sikaKhisimusi esikhule entabeni.
I-Blue Ridge Parkway enhle iqhele ngamamayela angu-19, nge-NC Highway 80 eningizimu. Hamba amamayela amahlanu ukuya enyakatho e-Crabtree Falls kanye namamayela angu-11 eningizimu ekungeneni kwe-Mt. Mitchell State Park. Idolobhana elikhulu lase-Spruce Pine lingamakhilomitha angu-14 nje empumalanga e-US 19.
IBurnsville iqhele ngamakhilomitha angama-35 enyakatho-mpumalanga ye-Asheville. Ukushayela okulula (amaminithi angu-45) phezulu ku-I-26 West ubheke eTennessee. Thatha ophumayo 9 ku-Highway 19 East futhi uhambe cishe amakhilomitha angu-16.
Ngixhumana nezivakashi zami kaningi ngendlela ezingathanda ngayo. Ngihlala ngitholakala. Ngihlala e-Charlotte kodwa ngishayelwa ucingo noma ngithumele umbhalo kuphela.
Hlola ezinye izinketho ezise- Green Mountain namaphethelo